... 11:27:00 AM
ဒါပေမယ့် ကြားဖူးတာတော့ chatting မှာ ကြူတဲ့သူတွေက တပြိုင်တည်း ဆယ်ယောက်လောက်ဆိုလား....
24 May 2009 at 12:19 PM
ချက်တင်အကြောင်းရေးတဲ့သူ တော်တော်များရဲ့ ချက်တင် ခံစားချက်တွေ လိုက်လံခံစားဖူးပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းအရာလိုတော့ ခံစားချက် မစုံဖူးဗျာ .. တကယ့်အဖြစ်အပျက်လား .. စိတ်ကူးကောင်းကင်ယံထက်က အိပ်မက်ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်လား တော်တော်လေး သဘောကျမိပါရဲ့
ဖတ်ပြီး ရင်ထဲမှာ တကယ်ကို ခံစားလိုက်ရပါတယ်ဗျာ။
ခုလိုပဲ တကယ် အပြင်မှာ ခံစားသွားကြရတဲ့သူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိနေခဲ့ပြီလဲနော်။ တစ်ချို့ကတော့ ပေါ့ပျက်ပျက်ပေါ့။ တစ်ချို့ကလဲ တကယ်ကို လေးနက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လဲပေါ့ဗျာ။ ရင်ထဲနှလုံးသားထဲက သံယောဇဉ်နဲ့ စွဲလန်းခြင်းဆိုတာကလဲလေ...။
25 May 2009 at 11:40 PM
မေနဲ့ မေချစ်သူ နဲ့ လဲ on line ချစ်သူတွေပါ
ကိုနေဒေးရေ ကျေးဇူးပါ နော်
ဇော် အချစ်လေ အချစ်လေ ချစ်လေခံစားရလေတဲ့
ကိုသော်ဇင် ရေ ကံကြမမ္မာ ပဲဆိုရတော့မှာပေါ့လေ
မမေ ရေ ကိုယ်က ချစ်တက်သလို ကိုယ့်ကိုချစ်တက်ဖို. ပညာလည်းလိုအပ်သေးတယ်ဗျ...
အင်း ညီညီကိုမမေးဘူးလား ၊ သတ္တိမရှိဘူးဆိုတဲ့ Myanmar Friends က သူငယ်ချင်းတွေရယ် ညီညီတို.ပဲ သိတာကို ဘယ်လိုမေးပါ့မလဲ လို. ...
ညီညီတို.လင်မယား ဂျပန်ကပြန်လာရင်တော့ မေးလိုက်ပါအုံးမယ်ဗျာ...
28 May 2009 at 10:33 AM
28 May 2009 at 2:11 PM
ဟင်း .. ဆုံပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူး ... ရက်စက်ပး(
29 May 2009 at 8:19 AM
ဘ၀ဆိုတာ ဖြစ်စေချင်သလို ဖြစ်တာမှ မဟုတ်တာနော်
ညီမင်းအိမ်.. ကို့ သယ်ရင်းတွေလဲ YGN Chat မှာဆုံကြ။ တကယ် နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ပြီး လက်ထပ်ဖြစ်ကြ။ ခုချိန်ထိလဲ အချစ်မပျယ် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ပေါင်းသင်းနေကြပါတယ်။ တချို့ဆို အချစ် ပုစုခရုလေးတွေနဲ့ လူဖြစ်ကျိုးတောင် နပ်လို့။
Moon နဲ့ Star ကောင်းကင်မှာရော၊ လူ့ဘ၀မှာရော ပြန်ပေါင်းဆုံပါစေဗျာ။
29 May 2009 at 11:07 AM